दुबईमा काम गर्ने विदेशीहरूका लागि - CV अपलोड गर्नुहोस् र व्हाट्सएप थप्नुहोस्!
दुबईका लागि बालबालिका - दुबईमा बस्ने काम गर्दै र आमाबाबु
दुबईमा विदेशियहरुको लागि रोजगार
नौकरिहरु मा दुबई विदेशीहरूको लागि संसार भर। रोक जागिर खोज्दै। र हाम्रो फर्मको साथ अवसरहरू लिनुहोस्। व्यावसायिक विशेषज्ञहरूको हाम्रो टोली। अमीरातमा नयाँ जीवन शैली प्राप्त गर्न मद्दत। विशेष गरी विदेशमा नयाँ कामदारहरुको लागि। दुबईमा क्यारियरको कारण। विदेशीहरूको लागि वास्तविकतामा सम्भव हुनुहोस्। यो मनमा, हामी उम्मेद्वार लिइरहेका छौ सारा संसारबाट। यस कारणको लागि हाम्रो टोली निश्चित रूपले विस्तारै उत्प्रेरित गर्दछ। विश्वभर रोजगारी प्राप्त गर्न। हामीले सञ्चालन गर्न सुरु गरौं। नयाँ जागिरकर्ताहरूले अपलोड गर्न सक्छन् CV हाम्रो भर्ती फर्म मा अमीरात मा। र बिन्दुमा, धेरैले विदेशमा रहेका देशहरु बाट रोजगार पाएका छन्।
सामान्यतया, संयुक्त अरब एमिरेट्स। छ विदेशीहरूको लागि मुख्य गन्तव्य। किनभने यो अरब देश मा स्थित छ पर्सियन खाडी। र यसलाई ध्यानमा राख्दै, यो गन्तव्य भारतीयको लागि राम्रो छ र पाकिस्तानी अधिकारीहरु। दुबई शहर र अबु धाबीको सकारात्मक पक्षमा। मुख्य बन्नुहोस् युएईमा व्यवसाय केन्द्र। किनकि यसको सेमान ओमानसँग सीमा छ साउदी अरब। र सब भन्दा सम्मोहक प्रमाण कि तिनीहरूले एक राम्रो व्यापार बनाउँछ। विशेष गरी छिमेकमा। यसबाहेक, आधिकारिक भाषा अरबी हो। र यो छ राम्रो संयुक्त अरब अमीरात मा शुरू। बस किनकी अर्को चरण एक हुन सक्छ कतार र सऊदी अरब.
तर नकारात्मक पक्षमा, पछ्याउन आवश्यक केही चीजहरू छन्। अमीरातमा नयाँ व्यक्ति उडान गर्नु अघि। सामान्यतया हाम्रो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दललाई बोल्दै। धेरै गाइड र स्रोतहरू लेखेका छन्। विशेष गरी नयाँ अधिकारीहरूका लागि। तिनीहरूलाई दुबई शहरमा रोजगारीको लागि खोज गर्न सुरु गर्न। किनभने विदेशीको रूपमा अवसरहरू खोज्दै। विशेष गरी संयुक्त संयुक्त अरब अमीरातमा धेरै कठिन हिसाबहरू।
उत्कृष्ट क्यारियरको लागि नौकरी खोज वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नुहोस्
सामान्यतया बोल्दै, संयुक्त अरब अमीरातमा नौकरी खोज वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नुहोस्. हाम्रो टोलीले पहिले नै धेरै राम्रो गाइडहरू राखे। विशेष गरी नयाँ विदेशबाट बाहिर निस्कन्छ। तर, हाम्रो टीमले फेरि केहि साइटहरू उल्लेख गर्दछ। नकारात्मक पक्षमा,aमानक व्यक्ति धेरै आशा गर्न सक्दैन। अधिकतम पुन: प्रदर्शनहरू 2.0% 3.0% सम्म छन् र निश्चित धेरै कम प्रतिक्रिया दरको लागि। र धेरै जसो केसमा मानिसहरू तपाइँलाई फेरि जवाफ दिनेछ। सायद तपाईले अपेक्षा गरेको व्यक्ति हुन सक्दैन। वा एक रोजगार प्रस्ताव तपाइँको अपेक्षाहरू अन्तर्गत हुन सक्छ। सजग हुन जसलाई तपाईंले आफ्नो आवेदन पत्र र CV पठाउनुभयो। किनकि संसारभरि धेरै घोटाला कम्पनीहरू छन्।
जे होस्, दुबई सिटी कम्पनीले तपाईंलाई प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। तपाइँको दर्ता गर्नुहोस् काम साइटहरू र कर्मचारी पोर्टलमा विवरण। सामान्यतया बोल्दै, यी भर्नाकर्ताहरूलाई एक शट प्रयास गर्नुहोस्। किनकि तपाईं कहिले आउँनुहुन्न मलाई थाहा छ। र कहाँ तपाईं मध्य पूर्व मा उडान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने विशेषगरी दुबई शहरमा। सरल एक टक जडानले सरल काम प्रस्ताव गर्न सक्छ। र तपाईं नयाँ एक्सट्याट हुन सक्नुहुन्छ। सामान्य रोजगार खोज इन्जिनको कारण। राम्रो छ नयाँ रोजगार र दुबईको लागि दुबईमा विदेशीहरुको लागि अझै पनि खुल्ला छन्। तर, क्लासीफाइड नौकरीले तपाईंलाई नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्दछ।
एक foreginer को रूप मा एक नौकरी को खोज कसरि?
संयुक्त अरब अमीरातमा नौकरी साइटहरूको बारे बढि जान्नुहोस्
खाडी प्रतिभाको बारेमा: खाडीमा सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक। सामान्यतया, धेरै राम्रो कामहरू संग फ्याँकिन्छ। हरेक दिन अपडेट गरियो खाली देशहरूका लागि रिक्तताहरू। र कतारमा अबू धाबीको पेशागत रोजगारको प्रस्ताव। धेरै व्यक्ति दुबई मा रोजगार पाए यस वेबसाइटमा विदेशीहरूका लागि।
बेल्टको बारेमा: संख्या। 1 कम्पनी मध्य पूर्वमा। विदेशीहरूको लागि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको। र एक शीर्ष रोजगार वेबसाइटहरू। सबै मध्य पूर्व र भारतका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानिसहरू। उनीहरूका कार्यकारीहरूलाई सीभी पठाउँदै.
Edarabia को बारे मा यो कम्पनी सबैभन्दा छिटो बढ्दै गएको छ। कम्पनीको मुख्य लक्ष्य भनेको मानिसहरू र विदेशीहरूलाई सिकाउनु हो। यो कम्पनी Google मा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। वास्तवमा, केही कामहरू प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, कम्पनी नौकरी चाहने को लागी केहि राम्रो गाइड प्रदान गर्दछ.
Dubizle को बारे मा एक अग्रणी क्लासिफाइड वेबसाइट हो। विशेष गरी दुबई शहरमा। अर्कोतर्फ, जेob खोजकर्ताहरूले कामका लागि खोजको लागि आफ्नो संयुक्त अरब अमीरात सेक्शन प्रयोग गर्दै भिसा संग। 2005 मा कम्पनी सुरुवात सञ्चालन त्यसो भए पछि dubizzle.com धेरै लोकप्रिय भएको छ। र संख्या नयाँ कार्य पोस्ट गरिएको छ। यो सामान्यतया वर्गीकृत प्लेटफर्म बोलाइन्छ। नौकरी चाहने र नियोक्ताहरूको लागि निश्चितको लागि।
Monster Gulf को बारे मा: राक्षस क्यारियर वेबसाइटमा। तपाई रोजगार खोज्न सक्नुहुन्छ। किनभने कम्पनीले लामो समयदेखि यसै गर्यो। र त्यस पछि राक्षसको उच्च ओहदा छ। र धेरै धेरै व्यक्ति उनीहरूसँग दर्ता गर्दै.
Glassdoor को बारेमा: कम्पनी, तथ्यको कुराको रूपमा, अवसरहरू राख्न थाले। विशेष गरी दुबई र अबू धाबीको लागि। र तब देखि, कम्पनीहरु समीक्षा प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै साक्षात्कार राख्ने। यसबाहेक, जागिर खोजकर्ता एमबीए शिक्षाको साथ कामको लागि आवेदन गर्न सक्छन्.
क्यारियर जेट को बारे मा क्यारियरजेट एक क्यारियर सर्च इन्जिन हो। र धेरै मानिसहरूले यसलाई संयुक्त अरब अमीरातमा प्रयोग गर्न सक्षम छन्। चाहे उनीहरूको अनुभव हो। अर्कोतर्फ, डिजाइन गरिएको प्रणाली एक नौकरी खोज्ने प्रक्रिया धेरै सजिलो बनाउँछ। र प्रयोगकर्ताको लागि इन्टरनेट धेरै सजिलो हुन्छ। जब क्यारियर जेट वेबसाइट सञ्चालन हुन्छ।
दुबई क्यारियरहरूको बारेमा दुबई करियर एक नौकरी पोर्टल हो। यसको अलावा एक छ स्रोत नौकरी खोजकर्ताको अभिनव विधि। सामान्यतया भन्ने हो भने यो स्मार्ट दुबई सरकार स्थापना द्वारा विकसित गरिएको छ। त्यसोभए, तिनीहरूसँग उच्च विश्वसनीयता रहेको छ। अर्कोतर्फ, यो पोर्टल निश्चित रूपमा युएईमा माथि सर्दछ।
रेड को बारे मा: यो सबैभन्दा ठूलो यूके नौकरी सर्च इन्जिन हो। अर्कोतर्फ, संयुक्त अरब अमीरात को लागि नौकरी पोस्टिंग छ। यो मनमा, बेलायतका मानिसहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खोज्ने। नयाँ रोजगारीको अवसरको लागि आवेदन गर्न सकिन्छ। साथै, तिनीहरूले GBP मा कार्य प्रस्तावहरू पोस्ट गर्दै छन्। त्यसैले यो साँच्चै यसको लागि एक लायक छ यसको लायक छ।
वास्तवमा बारेमा तिनीहरू व्यवसाय NO1 नौकरी साइट हो। र संसारमा शीर्ष3मा स्थान दिईयो। सामान्यतया कुरा, कम्पनी ठूलो मात्रामा बढ्छ। 200 मा 2018 मिलियन अनन्य दर्शकहरु संग। र हरेक महिना नयाँ साइन-अप राख्नुहोला।
Naukri को बारे मा, दुबई सिटी कम्पनी ले यो नौकरी साइट को उल्लेख गरेको छ। किनकि नाक्रीले संसारभरि भर्खरै भर्ती गरे। उदाहरणका लागि, भारत, संयुक्त अरब अमीरात र कतारमा यो साइट विदेशमा कामदारहरूको लागि रोजगारी पोस्टिंग भन्दा पूर्ण छ। साथै स्थानीय बजारमा प्रस्तावहरू अद्यावधिक गरियो।
लिमूनको बारेमा: यो नौकरी साइट यति छैन संयुक्त अरब अमीरात मा एक कैरियर को लागि लोकप्रिय। यस वेबसाइटको कारण कम्पनी वेबसाइटहरू बाट जागिर खुल्ला छ। सीधा र कतर र सऊदी अरब को लागि पोस्टिंग पनि छ।
दुबईका लागि विदेशियहरुको लागि रोजगारीहरू यो यसको लायक छ?
त्यहाँ धेरै छ संयुक्त अरब अमीरात मा क्यारियर को संभावनाहरु। अंग्रेजी सिकाउने देखि म्यानुअल काम सम्म। कम स्थितिमा शुरू एक विकल्प हुन सक्छ। केवल तपाईं एक मूल अरबी वक्ता हो भने मात्र। सामान्यतया, यदि तपाईसँग पर्याप्त अनुभव छैन भने। बिना दुबईमा अरबी भाषा। रोजगार को लागी कम मौका छ। सबै शीर्ष साइटमा। निश्चित रूपमा तयार छन् दुबईमा विदेशियहरुको लागि रोजगारी। साथै, तिनीहरू सबै सुन्दर छन्।
नकारात्मक पक्षमा, तिनीहरूसँग सबै छन् नयाँ नौकरी विकल्पहरूको ठूलो मात्रा। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै धेरै मानिसहरूले पुनःसुरु पोस्ट गर्दै छन्। र नयाँ रोजगार खोज्नेहरूले प्रत्येक दिन आफ्नो आवेदन व्यवस्थापन गर्न सक्दछन्। निश्चित रूपमा प्रत्येक रोजगार साइटहरू मार्फत। सकारात्मक पक्ष मा, दुबई धेरै दशकहरु को बढ्दो छ। र अ ​​language्ग्रेजी भाषा एमिरेट्समा मुख्य बन्छ। यो दिमागमा, संयुक्त अरब अमीरातमा जागिरको अवसर। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसोभए, दुबईमा विदेशीहरूका लागि रोजगारी खुल्ला हुन्छ। निश्चित रूपमा विदेशमा नयाँ कामदारहरू। राम्रो रोजगारी पाउने आशा गर्न सक्दछ। र खाडी क्षेत्र वरिपरिका विभिन्न देशहरू। नयाँ घर हुन सक्छ विदेशीहरूको लागि.
दुबई विदेशीहरूको लागि नियम तिनीहरू राम्रो छन्?
एमिरेट्स पृथ्वीमा सब भन्दा राम्रो स्थान हो। अर्कोतर्फ, कानूनी प्रणाली केहि हार्ड डिलहरूमा आधारित छ। उदाहरण को लागी, शरिया कानून को एक हार्ड लाइन व्याख्या। र केहि फरक परेको छैन, यो पछ्याउनु पर्छ। एउटा उदाहरणहरू अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरू प्रायः अबू धाबी वा दुबईमा कामको लागि भूमिमा छन्। विदेशीको रूपमा आफ्नो जीवन सुरु गर्दै। र नियमहरू पालन नगर्नुहोस्। त्यसैले, समयको कुरामा, अपराधको लागि जेलमा जमीन। यसकारण संयुक्त अरब अमीरातले पश्चिमीहरूलाई शिक्षित गर्ने प्रयास गर्दैछ। के गर्न र संयुक्त अरब अमीरातमा नगर्नुहोस्। यसले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ तिनीहरूलाई एक अपराध पनि गर्दैन.
नकारात्मक पक्षमा, भर्खरै भर्खरै उदाहरणहरू थिए दुबई शहर। त्यो विदेशी पर्यटक कानून ब्रेक। र वकीलहरूसँग भेट्न प्रयास गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, यूएई कानून सबैको लागि कडा हो। सार्वजनिक रूपमा हात समात्दै समावेश गर्नुहोस्। यसबाहेक, चैरिटीको लागि फेसबुकमा प्रशंसा पोष्ट गर्दै। यसबाहेक रक्सी पिए पनि लाइसेन्स बिना सार्वजनिक मा कडा निषेधित छ। केही नराम्रा विज्ञापनहरूको विज्ञापन गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, विपरीत लि sex्गको व्यक्तिको (आफ्नो पति / पत्नीबाहेक) एक होटेलको कोठा साझेदारी गर्नु।
यसबाहेक, दुबई अधिकारीहरू केही केसहरूमा एकदम अन्यायपूर्ण छन्। को संयुक्त अरब अमीरातमा सरकार। सँधै सोधपुछका लागि धेरै तरिकाहरू हेर्नुहोस्। कहिले आउँदैन शारजाह कानून ब्रेक गर्न अनुमति विदेशीहरूको खराब व्यवहार। सकारात्मक पक्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको लागि केही अपवादहरू छन्। उदाहरणका लागि, दुबई र अबू धाबी को होटल उनीहरूको वैवाहिक इजाजत पत्रको लागि जोडीहरू नसोध्नुहोस्।
कुन सामान्य हो दुबईमा स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि। यसबाहेक, युएईमा सबैका लागि एक जीवन्त रातको जीवन छ। त्यो एकदम अनौंठो हुन सक्छ तर धेरै समलिay्गी बारहरू र नाइटक्लबहरू हुन सक्छन् पूर्वी युरोपियन वेश्याहरु खुले मा नयाँ ग्राहकहरु लाई खोज्नुहोस। हो सामान्यतः सबै संयुक्त अरब अमीरातमा अन्तर्राष्ट्रियहरूको लागि खुल्यो.
एक नजर राख्नुहोस् बिभिन्न देशहरुमा काम गर्नु। खाडी क्षेत्रमा धेरै विकल्पहरू छन्!
कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, जोर्डन
कतार र एक्सटेट्स
कतारमा विदेशीको रूपमा कसरी सुरू गर्ने?
कतारमा, रोजगार पाउनका लागि धेरै तरिकाहरू छन्। उदाहरण को लागी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल को एक रिपोर्ट मा भनिएको छ कि विदेशी कामदार कतार मा एक नयाँ शहर को लागी निर्माण परियोजना को लागी उत्तरदायी छन्। र जुन धेरै रोजगार दिन चाहन्छ कतारमा बढी प्रक्षेपण। अर्को तर्फ, 2020 खेलहरूमा विश्व कप शोषण भइरहेको छ र यसको बावजुद गहन मानव अधिकार उल्ल despite्घनको अनुभव गरिरहेको छ सरकार सुधारको वाचा। अर्कोतर्फ, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले कतार जानु अघि जान्नु आवश्यक छ।
यदि तपाईं कुनै पनि कानूनी कम्पनीको लागि काम गर्नुहुनेछ। केही कम्पनीहरूको रिपोर्टमा बुधवार नामको एक ईन्जिनियरि company कम्पनी रेकर्ड गरियो MENA, जसले नेपालबाट 80 कामदार छोडे, भारत, र फिलिपिन्स कतार मा महीनहरु को लागी भुक्तान गरीएको छ। त्यसोभए, तपाईंले जहिले पनि राम्रो कम्पनी छनौट गर्नुपर्नेछ मध्य पूर्वमा काम गर्न।
तर सरकारले जे भए पनि कम्पनीहरूलाई चार्ज गर्‍यो। केवल किनभने यो पत्ता लागेको थियो कि उनीहरूले काफला संरचना प्रयोग गरे जसले कतारको प्रायोजन कार्यक्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्थे। र त्यसले कर्मचारीहरूलाई क्रमबद्ध गर्न एकल नियोक्तासँग टाँस्यो धेरै संख्यामा विदेशी कामदारहरूको शोषण गर्न। नेपालमा 34 व्यक्तिहरूले एम्नेस्टीलाई खबर गरे कि बुध MENA उनीहरूको औसत 1,500 पाउन्डको कारण हो, र काफला प्रणाली उनीहरूको शोषणको लागि प्रयोग भएको थियो। त्यसो भए, सधै हाम्रो टीमसँग कुरा गर्न कोसिस गर्नुहोस् वा कम्तिमा नराम्रो कम्पनीहरूबाट टाढा रहनुहोस्।
कतारमा कामको लागि कसरी आवेदन गर्ने?
सबै भन्दा राम्रो कतार रोजगार साइटहरू सरकार सम्बन्धित छन्। यसको एउटा उदाहरण हो मंत्रालयको स्वामित्व वाली रोजगार साइट। ती मध्ये एक उत्तम केन्द्रिय भिसा सूचना को लागी परिचित साइटहरु हो। र तपाइँ भिसाको प्रकार छनौट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई विद्यार्थी भिसा, भिजिट भिसा, वर्क भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, त्यहाँ छ गुगलमा त्यस्ता जानकारी फेला पार्न कुनै समस्या छैन। यसको लागि उत्तम स्रोत स्थानीय दूतावास हो। अर्कोतर्फ, तपाईं आफ्नो देशको वाणिज्य दूतावास जान सक्नुहुन्छ। उनीहरूसँग कतारको लागि सबै भिसा छ। त्यसोभए, अब व्याख्या गर्ने समय छ साइट खोजी कार्यको लागि उपलब्ध छकतार मा s तल सूचीबद्ध छ।
कतारमा विदेशीको रूपमा रोजगारी खोज्नु त्यति सजिलो छैन, जब तुलनाको साथ अर्को मध्य - पूर्वी देशहरू तर सम्भव छ। आवश्यक कागजातहरू जुन रोजगारीको लागि आवेदनको लागि माग गरिएको हुन सक्छ धेरै ठूलो छ। तर उनीहरूको ज्याला लगभग छ मध्य पूर्व मा एक उत्तम.
सऊदी अरब र एक्सटेट्स
सउदी अरबमा विदेशी कामदारहरूको रूपमा कसरी सुरू गर्ने?
ठीक छ, भित्र साउदी अरब, विदेशी कामदारहरू 15 मा 2019million अनुमान गरिएको थियो। को तेल व्यापार र नयाँ अवसर पत्ता लगाइयो त्यो देशमा एक विशाल सम्भावना। र यसैले 1930s लेटमा प्रवासलाई प्रोत्साहित गरियो। वर्तमानमा उनीहरूसँग साउदी अरेबियाको विकासको लागि ठूलो विकल्प छ। त्यसो भए, तिनीहरूले विदेशी श्रम श्रमशक्तिलाई काममा लिइरहेका छन्। जे होस्, केहि कृषि, घरेलु सेवा उद्योग र सफाई जस्ता अन्य क्षेत्रहरु मा भर्ती गरिएको छ। साउदी अरेबियाली अधिकारीहरु प्रेम को रूप मा सबै ठाउँमा ठाउँमा छ र कुनै पनि बिन्दुमा जान तयार छ.
मानक मुस्लिम देश मा जस्तै। विदेशीहरूको राष्ट्रियता को पदानुक्रम निर्धारण गर्दछ विदेशी कामदार। र तपाई आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, भारत र पश्चिमी देशका कामदारहरू जो साउदी अरेबिया सारिएका छन्। तिनीहरू प्रायः उच्च पदहरू पाउदछन् साउदी व्यवस्थापकहरूले पनि समात्न सकेका छैनन्। र तल्लो पदहरू द्वारा आयोजित अफ्रिकी र दक्षिण पूर्व एशियाईहरू.
साउदी अरेबिया देश सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा बढी भएको थियो विश्वमा अविकसित देशहरू धेरै समय अघि। तर टेक्साको तेल (अमेरिकी कम्पनी) द्वारा तेलको खोजी गर्नु अघि। अन्वेषण पछि धेरै लामो छैन। विदेशी सहायता र विशेषज्ञता पत्ता लगाइएको विशाल तेल भण्डारको उपयोग गर्न आवश्यक थियो।
साउदी अरेबियामा विदेशी कामदारको संख्यामा उछाल बढेको थियो। र यसको परिणामको रूपमा मुख्यतया अन्य मध्य पूर्वी देशहरूबाट आविष्कार। विकास परियोजनाहरु र पूर्वाधार योजनाहरु कुशल र अकुशल श्रमिकहरुको भीड को प्रोत्साहित। र यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै, धेरै जसो कामदारहरू प्यालेस्टाइनका थिए। र त्यसपछि उनीहरूले मिश्रीहरू, येमेनिहरू र अरूहरू प्राप्त गर्न शुरू गरे अरब देशहरूबाट.
त्यसकारण, सऊदी अरबमा मेरो लागि कुनै काम छ?
2023 सम्म साउदी अरेबिया सब भन्दा धनी अरब देश भनेर चिनिन्छ। त्यो पनी निश्चित रूपमा expats को लागी एक राम्रो जानकारी हो। उनीहरुसँग छ मध्यपूर्वमा अवस्थित कम्पनीहरूको धेरै। हाम्रो कम्पनी सउदी अरबमा एक विदेशीको रूपमा रोजगारी खोज्नेहरूको लागि जहिले उपलब्ध साइट हुन्छ। नकारात्मक पक्षमा, साउदी अरेबियामा, भिसा प्रक्रियाहरु पनि यति सजिलो छैन। हामी विश्वका सब भन्दा गाह्रो र सबैभन्दा भ्रममूलक मध्ये एक भन्दछौं। विशेष गरी युरोप वा विदेशबाट आएका विदेशीहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका.
साउदी सरकारको मार्केटि team टोली पर्यटनको सक्रिय बजार गर्दैन। ती दुबई स्वागत प्रकारका मानिसहरू होइनन्। त्यसो भए2हप्ता भन्दा कममा पर्यटक भिसा पाउन असम्भव देखिन्छ। साउदी अरेबियामा प्रवेश गर्न अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ। विशेष गरी इजरायली टिकटका मानिसका लागि। त्यसोभए यदि तपाईं अद्यावधिक पासपोर्टको साथ यस देशबाट हुनुहुन्छ भने। जे भए पनि तपाई के गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई जे भए पनि कागजातहरू आवश्यक पर्दछ। तर त्यो तपाईंको काम आवेदन अनुरोध गरिएको हुन सक्छ। धेरै जसो केसहरूमा पनि।
त्यहाँ कामको लागि चलाखीपूर्ण सुझाव मध्ये एक। स्कूलमा शीर्ष उपलब्धि प्रमाणपत्र जस्तो कागजातहरूसँग छ। विशेष गरी सहयोगी हुनेछ यदि तपाईंले तिनीहरूलाई भित्र बनाउनु भयो भने मुस्लिम देश को एक। उदाहरणको लागि कलेज वा विश्वविद्यालय, चरित्र प्रमाणपत्र र कुनै अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्र। कतार वा संयुक्त अरब एमिरेट्सको युनिभर्सिटीबाट। तर सकारात्मक पक्ष मा, एक मात्र चीज तपाईं प्राप्त गर्न को लागी काम तपाईंको CV हो। त्यसोभए, तपाइँले अनुप्रयोगसँग कहाँ हिट गर्ने जान्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं सही तरिकामा मार्केटिंग गर्नुहुन्छ भने। भर्तीकर्ताहरूलाई तपाईसँग काम गर्न सल्लाह दिइन्छ। र समय र प्रयास तपाईं आफ्नो CV उत्तम बनाउन खर्च हुनेछ। कुनै पनि बिन्दुमा हराएको चाहन्छु।
संयुक्त अरब अमीरात र एक्सटेट्स
संयुक्त अरब अमीरात मा एक विदेशी को रूपमा कसरि शुरू गर्ने?
खैर, संयुक्त अरब अमीरात (संयुक्त अरब अमीरात) युएई सरकार आप्रवासीहरूका लागि हो। र यो देश विदेशबाट नयाँ कामदार लिन खुशी छ। यसबाहेक, विश्वभर बाट विदेशीहरू। छन् त्यहाँ जाँदा हेर्दा अझै पनि कर-रहित छ। यसबाहेक, सरकारी सम्बन्धित रोजगारहरू सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। केवल किनभने युएईका नागरिकहरू विश्वास गर्छन् कि त्यहाँ शर्मिलो छ केही निजी क्षेत्र को रोजगार संग काम गर्दै। अधिकांश स्थानीय अरबहरू सरकारी ठेक्का र परियोजनाहरुमा काम गर्छन् वा सेनामा काम गर्छन्। देशको कामका लागि भिसा प्रक्रिया र कानूनी कागजात धेरै सजिलो छ। यसबाहेक, समाज, जब छिमेकी देशहरूसँग तुलना गरिन्छ। उदाहरण को लागी, साउदी अरेबिया र कतार छन् पुनर्वास प्रक्रिया को मामला मा धेरै राम्रो.
युएईमा कल्पना गर्न सक्ने अझ बढी आकर्षणहरू छन्। र यो दिमागमा, विश्वव्यापी विदेशीहरू त्यहाँ सर्दै छन्। मध्येको एउटा हामीले समावेश गर्ने रोजगारी खोज्नेहरू पश्चिमी देशका मानिसहरू हुन्। सामान्यतया भन्ने हो भने, अमीरातीहरू आफ्नै देशमा जनसंख्या कम छन्। उदाहरण को लागी, नौ को एक अनुपात मा। थप, युएई सरकारले कानून स्थापना गर्‍यो। र त्यो भन्छ कि एक आप्रवासी कम्तिमा 30 वर्षको अवधिमा देशमा बसेर युएई नागरिकताको लागि आवेदन दिन योग्य छ। त्यसोभए, वास्तवमा तपाई त्यहाँ लामो समयको लागि हुनुपर्दछ। तपाईं अघि पनि युएईको नागरिक बन्ने मौका पाउनुहोस्.
मलाई संयुक्त अरब अमीरातमा काम पाउन के चाहिन्छ?
अन्तिम कुरा रोजगार खोज्नको लागि युएई कागजातहरू। उदाहरण को लागी, स्कूल मा एक शीर्ष उपलब्धि यूएई प्रमाणपत्र। हुनेछ निश्चित रूपमा तपाईलाई नयाँ अवसरको लागि बार बढाउन मद्दत गर्दछ। र यदि तपाईंसँग अन्तर्राष्ट्रिय कलेज वा विश्वविद्यालय छ भने। यो पक्कै हुनेछ युएई क्यारियर बनाउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। अर्को तर्फ, चरित्र प्रमाणपत्र र सम्मानजनक स्रोतहरू बाट कुनै अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू जस्तै यूएस वा बेलायत यो एक हो अरबी संसारमा फाइदा। तर वास्तविकतामा तपाईले काम पाउनु पर्ने एक मात्र चीज भनेको तपाईको रिजुमे हो। यसले तपाईंको अनुभवलाई मार्केटिंग गर्दछ, त्यसैले तपाईको CV उत्तम बनाउनको लागि काम गर्न सल्लाह दिइन्छ। र जहिले पनि गल्ती नभएको निश्चित गर्नुहोस्। त्यो याद गर्नुपर्दछ संयुक्त अरब एमिरेट्समा तपाई अंग्रेजी सीभी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
जोर्डन देश र एक्सटेट्स
जोर्डनको विदेशीको रूपमा कसरी सुरू गर्ने?
मध्य पूर्वमा अर्को स्थान जोर्डन हो। किनभने यो देशले रेकर्ड ब्रेक गर्दछ। तिनीहरू राम्रा मानिसहरू हुन् र यसमा2मिलियन प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरूको 2015 मा भएको घर छ। त्यसोभए, तिनीहरूले केवल भाँडामा लिने मात्र होइन अन्यलाई पनि समर्थन गर्दछन्। त्यहाँ लगभग 98% छ जोर्डनियन जनसंख्या अरबहरू छन्। यसबाहेक, बाँकी 2% जातीय अल्पसंख्यक हो। जोर्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन। टिभी र समाचारमा भनिएको छ कि जोर्डनमा श्रम स्थिति कडा छ। को कारणले काउन्टरमा कम योग्य कार्यबलको उपस्थितिy उदाहरण को लागी, "एक चुनौतीपूर्ण बजार बढी चुनौतीपूर्ण बन्न" शीर्षक को एक रिपोर्ट मा विदेशी कामदारहरु। त्यसो भए तपाई तयार हुनुपर्दछ र धेरै अधिक कार्य रोजगार को लागी खोजी गर्नुहोस्। ब्यवस्थापकहरू वा वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू।
सेप्टेम्बर 2016 मा सम्पन्न विस्तृत अनुसन्धानको परिणामको रूपमा। कुन सरकारी संगठनको उद्देश्य र सामान्यीकरण। धेरै शरणार्थी जनसंख्या होस्ट गर्न जोर्डनको असाधारण उदार योगदानको प्रभावले धेरै व्यक्तिहरू पहुँच गरेका छन्। यसका साथै यसको राष्ट्रिय श्रम बजारमा उनीहरूले भनेका छन् कि यसको काम गर्ने जनसंख्या छ। सरकार सम्बन्धित प्रतिवेदन को इरादा विदेशी कामदारहरूका लागि प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै। राष्ट्रिय बजारमा जोर्डनमा रोजगार दर कसरी बढाउने भन्ने बारेमा।
त, त्यहाँ मेरो लागि जोर्डन मा कुनै काम छ?
अर्कोतर्फ, तिनीहरूले कसरी कामको वातावरण सबै कामदारहरूको लागि सहज छ भनेर सुनिश्चित गर्ने भनेर खोजी गर्ने प्रयास गर्दछन्। विदेशबाट एक मात्र होईन सबै प्रकारको एक्साट्स र स्थानीय कार्यबलको लागि। र साथै, कसरी जॉर्डनका कामदारहरू नहटाई सिरियाली शरणार्थीहरूलाई कसरी सामेल गर्ने। र यो युरोपेली सदस्यहरूले सोधेको ठूलो प्रश्न थियो। शरणार्थीहरुलाई श्रम बजार खोल्न को लागी बोलिएको थियो सुनिश्चित गर्न को लागी कि न्यूनतम को उपयोग को लागी विशेष ध्यान दिईन्छ विदेशी कामदारका लागि श्रम मापदण्डs, तिनीहरूको स्थिति जस्तोसुकै भए पनि। जोर्डन वर्क परमिट पाउनको लागि, तपाइँको रोजगारदातासँग मिलेर काम गर्नु सर्वप्रथम हो रोजगारका लागि अनुप्रयोग आवश्यक पर्दछ जॉर्डनमा सरकारी वेबसाइटहरू मार्फत पहुँच गर्न एकदम सजिलो छ।
कुवैत देश र एक्सटेट्स
कुवैतमा विदेशी कामदारहरूको रूपमा कसरी सुरू गर्ने?
कुवेत मा, पछिल्ला वर्षहरु मा एक ठूलो परिवर्तन छ। उदाहरण मध्ये एक विदेशी कामदार प्रायोजन प्रणाली हो। वैधानिक बन्नुहोस् र परिणाममा विदेशीहरूलाई कामको अनुमति प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय रोजगारदाताले लगानी गर्न आवश्यक छ। त्यसो भए, त्यहाँ एक स्मार्ट सम्पूर्ण छ धेरै व्यक्ति सफल रोजगारी खोजीमा जानको लागि प्रयास गर्छन्s अगस्त एक्सएनयूएमएक्समा ठूलो परिवर्तन भएको थियो, सांसद अब्दुल्लाह अल-रोउमीले भने कि उनी कुवेतको कफेल विदेशी कामदार प्रायोजन प्रणाली खारेज गर्न कानून तयार गर्न लागेका थिए। त्यसो भए तिनीहरू सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्छन्। थप, त्यो परिवर्तन प्रवासीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन थियो। सरकारले नयाँ प्रणाली आविष्कार गर्न प्रायोजन प्रणाली रद्द गर्ने योजना बनाइरहेको थियो। र उनीहरुका उद्देश्य यो सही थियो किनभने यसले विदेशीहरूलाई उनीहरूको निवास अनुमतिहरू हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ। र त्यसबेलादेखि सामाजिक मामिला र श्रम मन्त्रालयले उनीहरूको मुद्दा लिन्छ।
नकारात्मक पक्षमा, उदाहरणका लागि स्विजरल्याण्डबाट एक विदेशीको रूपमा। तपाईं कुवेत मा एक रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र निश्चित रूपमा त्यो रोजगार राम्रो भुक्तान हुनेछ र लामो समयको लागि। त्यसोभए, कुवेतमा पहिले नै कामले स्मार्ट आन्दोलनको सिलाई गर्‍यो। तर तपाईले काम सुरू गर्नु भन्दा पहिले तपाईलाई वर्क भिसा चाहिन्छ जस्तो कुनै अरबी देशमा। वर्क परमिट र वर्क भिसा पूर्ण रूपमा बिभिन्न चीजहरू हुन्, वर्क परमिट सुरक्षित गर्नका लागि तपाईले आफ्नो नियोक्तासँग केहि समयको लागि काम गर्नुपर्दथ्यो, र वर्क परमिट पाए पछि, आवश्यक छ कुनै पनि नजिकको दूतावास मा काम प्रवेश भिसा प्राप्त गर्न.
त्यसकारण, कुवैतमा मेरो लागि कुनै काम छ?
कुवेत देशसँग एक उत्तम निजी वेबसाइटहरू छन्। ठीक छ, केन्द्रीकृत भिसा जानकारी को लागी जान्नुहोस्। त्यो पनि हो विदेशीहरूले आशा गर्न सक्ने भिसाको प्रकारलाई बेवास्ता गर्दै। उदाहरण को लागी, यो एक छात्र भिसा वा आगन्तुक भिसा हुन सक्छ, र त्यसमा तपाई वास्तवमै प्रबन्धन गर्न सक्नुहुन्न। अर्कोतर्फ, काम भिसा आदिमा अवश्य पनि, त्यस्ता जानकारीहरू बिंग वा गुगलमा फेला पार्न कुनै समस्या हुनेछैन। कुवेतमा रोजगारी खोज्नेहरूका लागि उपलब्ध उत्तम साइटहरू अनलाइन सूचीबद्ध छन्। तपाइँ तिनीहरूलाई टाइपिंग फेला पार्न सक्नुहुन्छ कुवेतमा विदेशीहरू वा कुवेतमा रहेका क्यारियरहरूको लागि कामहरू.
एक देशको रूपमा कुवेतसँग वित्तीय क्षेत्रहरूमा सबै भन्दा राम्रो रिक्त स्थानहरू छन्। त्यसो भए, एक विदेशीको रूपमा रोजगारी पाउनको लागि, तपाईंले सुरुमा आर्थिक रोजगारहरू छोड्नु पर्छ। अर्कोतर्फ, जब हामीले अर्को मध्य - पूर्वी देशहरूसँग तुलना गर्यौं यो प्राप्त गर्न सजिलो छैन तर यो सम्भव छ। कुवेतलाई कागजातहरू आवश्यक पर्दछ जुन कुवेत दूतावासमा कामका लागि आवेदनको माग गरिन्छ।
दुबईको लागि विदेशी कर्मचारीको रूपमा निष्कर्ष
दुबईका लागि दुबईका लागि विदेशीहरू संसारभरबाट जाने राम्रो छन्। र यो संग दिमाग मा, धेरै मान्छे। विशेष गरी अधिकारीहरू, निश्चित रूपमा कामको लागि राम्रो मौका पाउँछन्। एक मात्र काम गर्दै बिन्दु दुबई वा अबू धाबी मा एक जीवनशैली हो। अमीरातका नयाँ आगन्तुकहरू। धेरै नियमहरूको पालन गर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ दुबई विदेशी अधिकारीहरूको स्वागत गर्दछ। उदाहरण मध्ये एक दुबई एयरपोर्ट, होटल्स वा मोटर वाहन व्यवसाय। दुबईमा यी स्थानहरूमा। नयाँ व्यक्ति भेट्टाउन सकिन्छ। पाकिस्तानी श्रमिकों देखि भारतीय अधिकारियों सम्म। त्यसैले, हाम्रो कम्पनीले विश्वभरका कामदारहरूलाई निश्चित रूपमा सल्लाह दिन्छ। निश्चित रूपमा, दुबई सिटी भ्रमण गर्न र विदेशमा काम सुरु गर्नुहोस्.
कुनै पनि देशले यी साइटहरू उपलब्ध गराउँदछ वैदेशिक रोजगारी खोज्नेहरूले मध्य पूर्वमा रोजगारी पाउन चाहन्छन्। त्यसैले फेरि हामी तपाईंलाई यो रोजगार साइटहरूको बारेमा सम्झना गराउँछौं।
शीर्ष नौकरी साइटहरू र पोर्टलहरू
Gulf Talent धेरै राम्रो गुणस्तर र व्यावसायिक जागिरहरू छन्
दुबईमा जागिरहरू विशिष्टमा रोजगार पोस्टि .हरू छन् दुबई मा स्थानहरु
नौकरी अबू धाबी अबू धाबी मा विशिष्ट स्थानहरुमा नौकरी पोस्टिंग छ
Dubizzle अबू धाबी को लागि एक विशाल साइट को रूप मा वर्गीकृत गरिन्छ
सिसाको ढोका अबू धाबी र दुबईमा अवस्थित हुन जान्छ
बेट ध्यानमा राखिएको छ मध्य पूर्वमा शीर्ष काम खोज्ने वेबसाइटहरू मध्ये एक हुन.
Monster Gulf एक राक्षस काम खोज ब्रांड हो जुन ईन्टरनेट युगको प्रारम्भदेखि नै अवस्थित रहेको छ।
Gulf Jobs बजार कार्यकारी स्तरको रोजगारका लागि राम्रो छ।
क्यारियर जेट यो एक लोकप्रिय हो युएईका लागि रोजगारी खोजी विकल्पहरू छन्.
वास्तवमा युएईको अमेरिकी काम साइट संस्करण हो।
4 राम्रो जान्नुहोस् पढाउने रोजगार बारेमा छ जस्तो देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगारहरू छन्।
लेमेनून एक साइट सीधा उद्घाटन एकत्रिकरण को लागी कम्पनी को वेबसाइटहरु बाट जानिन्छ।
मध्य पूर्वमा अंग्रेजी सिकाउँदै
अर्को स्मार्ट तरिका, र कृपया यो नबिर्सनुहोस् कि अंग्रेजी पढाउँदैछ। र हाम्रो कम्पनीले जहिले पनि उनीहरूलाई सिकाउँदछ कि अ teaching्ग्रेजी पढाउन, सिकाउनमा रुचि छ। तिनीहरूले सक्छ निश्चित रूपमा स्मार्ट र सजिलो विकल्प छनौट गर्नुहोस्। अवश्य पनि, यदि तपाईं अ Speaking्ग्रेजी बोल्ने, वा लेखनमा पोख्त हुनुहुन्छ। हाम्रो भर्ती टोली हरेक नयाँ साइटका बारे ब्राउज गर्न नयाँ रोजगारी खोजी गर्ने सल्लाह दिईन्छ रोजगारीका अवसरहरूको लागि युएईमा सिकाउनको लागि उनीहरूले साइटहरू जस्तै प्रयास गर्न सक्दछन्;
कुल ESL विदेशमा पढाउन चाहनेहरूको लागि अत्यधिक व्यस्त इन्टरफेस हो।
ESL कैफे संसारभर बाट सबै भन्दा राम्रो रोजगार को लागी एक हो।
टेस्टल्यान्ड एक साइट हो जुन ठूलो शिक्षण कार्यहरू समेट्छ।
फुटपाथ भर्ती उपलब्ध सबैभन्दा ठूलो ESL शिक्षण भर्तीकर्ताहरू मध्ये एक भएको पत्ता लगाइएको छ।
रुचि राख्नेहरूका लागि वित्तीय रोजगारयहाँ केहि प्रवासी र एक्सटेट अय्यूब पोर्टलहरू;
eFinancialCareers वेब मा उपलब्ध उपलब्ध उपलब्धिहरु को लागि पसंदीदा खोज इन्जिनहरु मध्ये एक हो तर यद्यपि, कतार को लागि उनि उपलब्ध छैनन्
विदेश गए साथै राम्रो कामहरू पनि खोज्न गएको छ
Oversea Jobs एक साइट हो जुन अहिलेको लागि उपलब्ध भएको छ तर त्यहाँ यी साइटहरू र अन्य साइटहरूमा पोस्टिङ बीचको महत्त्वपूर्ण ओवरलैप जस्तो देखिन्छ।
LinkedIn क्षेत्रमा सम्पर्कहरू निर्माण र तपाईंको रुचिको स्थानका लागि एक ठूलो नेटवर्क सञ्जाल संसाधन हो
त्यहाँ अन्य वेबसाइटहरू जस्तै छन्;
संरक्षक संयुक्त अरब अमीरात मा फिर्ती को लागि विस्तृत पृष्ठहरु को एक ज्ञात छ
टेलीग्राफ तयारीको लागि राम्रो वित्तीय सल्लाह दिन्छ
मध्य पूर्व, विशेष गरी युएई, साउदी अरेबिया र कतार। अन्य मध्य पूर्वी क्षेत्रहरू भन्दा बढी क्षेत्रहरूमा विदेशीहरूका लागि सँधै राम्रो रोजगारी रहेको छ। केवल किनकि उनीहरू अझ धेरै परियोजनाहरू विकास गर्न खोजिरहेका छन्। तर नकारात्मक पक्ष मा, विदेशहरु मा कामदारहरु को लागी केहि प्रक्रियाहरु छन्। उदाहरण को लागी, कागजातहरू जुन कुनै रोजगार आवेदन मांगिएको हुन सक्छ:
राष्ट्रिय पहिचान कार्ड
अभिभावक पहिचान कार्डको प्रतिलिपि
24 पासपोर्ट साइज रङ फोटो
ड्राइभिंग लाइसेन्स (यदि छ भने)
भिसा जानकारी र कागजातहरू
तपाईंको देश बाट बैंक खाता
पीओआई - पहिचानको प्रमाण (वास्तविक एक)
साथै मूल डिप्लोमा सर्टिफिकेटहरू (यदि तपाई छन् भने)
पासपोर्टको रंगीन प्रतियां 2
पोष्ट - विज्ञापन को प्रमाण
स्कूल शिक्षा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
कलेजले प्रमाणपत्र दियो
र केहि अन्य कुराहरू तिनीहरूले अनुरोध गर्न सक्छन्
त्यसोभए, तपाइँले देख्नु भएको छ, अवसरहरू तपाइँका लागि त्यहाँ छन्। तपाईलाई गर्नुपर्ने भनेको केवल विदेशमा नयाँ जीवन सुरु गर्न पर्याप्त हिम्मत हुनुपर्दछ। त्यहाँ मध्य पूर्वमा3मिलियन भन्दा बढी प्रवासीहरू काम गरिरहेका छन्। तपाईं पनि तिनीहरू मध्ये एक बन्न सक्नुहुन्छ। र वास्तविकतामा तपाईसँग कार्यको राम्रो योजना हुनु आवश्यक छ। यसबाहेक, सबै चीजहरू तपाईंको जन्मभूमिमा क्रमबद्ध गरियो र विदेशमा काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो कम्पनी सधैं तपाइँको आवेदन को लागी प्रतीक्षा गर्दै। त्यसोभए, कृपया तपाइँको CV हाम्रो HR टीमको साथ दर्ता गर्नुहोस्। हाम्रो भर्तीकर्ताहरू निश्चित रूपमा तपाईलाई मद्दत गर्न इच्छुक छन्!